सॉलिस्टेस र विषुववृत्ति: तिनीहरू के हुन्, विशेषता र जिज्ञासुहरू नेटवर्क मौसम विज्ञान
सॉलिस्टेस र विषुव
जर्मन पोर्टिलो | 24/03/2021 11:03 | Ciencia
हामीलाई थाहा छ कि पृथ्वीसँग धेरै आन्दोलनहरू छन् जुन घुमाउने र अनुवादको हो। यसको अर्थ हाम्रो मतलब यो हो कि यी आन्दोलनहरूको कारणले, त्यहाँ छन् solstices र विषुववृत्त। विषुव वर्षको एक समय हो जब सूर्य भूमध्यरेखाको ठीक माथि अवस्थित हुन्छ, त्यसैले यसलाई जेनिथमा राखिन्छ। यसको मतलब दिन र रात लगभग समान अवधि हुन्छ। विरोधाभास संक्रान्ति संग हुन्छ।
यस लेखमा हामी तपाईंलाई सबै सुविधाहरू र solstices र विषुववृत्त बीचको भिन्नता बताउन जाँदैछौं।
1 सोल्टिसिस र विषुववृत्ति के हो?
2 गर्मी र जाडोमा Solstices र विषुव
2.1 गर्मी संक्रांति
2.2 सॉलिस्टेस र विषुववृत्ति: जाडो संक्रांति
2.3 वसन्त र शरद विषुव
सोल्टिसिस र विषुववृत्ति के हो?
सबै भन्दा पहिले solstices र विषुववृद्धिहरू के हो भनेर जान्नु हो। विषुववृत्ति तब हो जब सूर्य भूमध्यरेखामा अवस्थित हुन्छ र दिन रातको जस्तै रहन्छ। त्यो हो, तिनीहरू लगभग १२ घण्टा टिक्छ। यो वर्षमा दुई पटक हुन्छ, मार्च २० र सेप्टेम्बर २२ तिर। यो केही क्षेत्रहरूमा वसन्त र गिरावटको साथ मिल्छ।
यदि हामीले ग्रहलाई दुई भागमा विभाजित गर्यौं भने एउटा सूर्यको किरणद्वारा प्रकाशित हुन्छ र अर्को अस्पष्ट हुन्छ। एउटामा हामीसँग दिन छ र अर्को रातमा। विभाजन रेखा खम्बाबाट पार हुन्छ। यो हुन्छ किनकि विषुववृत्तिको समयमा दुबै ध्रुव सूर्यको तर्फ वा टाढा झुकाव हुँदैन। यो सधैं एकै दिनमा हुँदैन। तिनीहरूसँग धेरै दिनको मार्जिन छ। यो किनभने वर्षको लम्बाई सधैं एक समान हुँदैन। याद गर्नुहोस् कि प्रत्येक years बर्षमा यदि तपाईं क्यालेन्डरमा एक दिन थप गर्नुहुन्छ किनभने यो वर्षको रूपमा छ। विषुववृत्तिको समयमा, सूर्य गोलानमा दुई बिन्दु मध्ये एकमा अवस्थित हुन्छ जहाँ आकाशीय भूमध्यरेखीय र ग्रहण विभाजित हुन्छ। यो भूमध्यरेखा जस्तै उही विमानमा सर्कलमा मिल्दछ। भन्नुको अर्थ, आकाशीय क्षेत्र स्थलीय भूमध्यरेखाको प्रक्षेपण हो।
ग्रान्ड विषुव मात्र हुन्छ जब ऊ केवल ग्रहणको जहाजमा उत्तरमा सर्दछ र सम्पूर्ण आकाशी भूमध्यरेखा पार गर्दछ। यहाँ हामी देख्छौं कि वसन्त seasonतु उत्तरी गोलार्धमा शुरू हुन्छ। अर्को तर्फ, शरद equतु विषुव हुन्छ जब सूर्य आकाशी भूमध्यरेखा पार गरेर दक्षिण तिर जान्छ। यसले गिरावटको सुरूवात गर्दछ।
सॉलिस्टेसहरू ती घटनाहरू हुन् जसमा सूर्य आकाशमा वर्षभरिमा आफ्नो उच्चतम वा न्यूनतम बिन्दुमा पुग्दछ। उत्तरी गोलार्द्धमा एक बर्षमा त्यहाँ दुईवटा घोलहरू छन्। एकातिर हामी गर्मी संक्रान्त छ र अर्कोतर्फ जाडो अक्रान्त। पहिलो जून २०-२१ मा र हिउँद संक्रांति डिसेम्बर २२-२२ मा हुन्छ। दुबै संक्रान्तिको क्रममा सूर्य पृथ्वीमा दुईवटा काल्पनिक रेखामध्ये एउटामा अवस्थित हुन्छ जुन क्यान्सरको ट्रपिक र मकर राशिको ट्रपिक भनेर चिनिन्छ। जब सूर्य क्यान्सरको ट्रोपिकमा खडा हुन्छ ग्रीष्म संक्रांति हुन्छ र जब यो मकर राशिको ट्रपिकमा स्थित हुन्छ, जाडो सुरु हुन्छ।
पहिलो विलयनको बखत यो जहाँ हामी वर्षको सबैभन्दा लामो दिन फेला पार्छ, जबकि दोस्रो छोटो दिन र सबैभन्दा लामो रात हो।
गर्मी र जाडोमा Solstices र विषुव
सॉलिस्टेस र विषुववृत्ति: जाडो संक्रांति
पृथ्वीमा सूर्यको दूरीका हिसाबले हिउँद र गर्मीको बारेमा समाजमा एउटा नराम्रो धारणा रहेको छ। ग्रीष्म inतुमा यो तातो छ किनकि पृथ्वी सूर्यको नजीक छ र जाडोमा यो चिसो छ किनकी हामी बुझ्न सक्दछौं। अझै टाढा फेला पार्नुहोस्। तर यो बिल्कुल विपरीत हो। सूर्यको सम्बन्धमा पृथ्वीको स्थिति भन्दा बढी, ग्रहको तापक्रमलाई कुन कुराले असर गर्छ झुकाव भनेको सूर्यको किरणहरूले सतहमा हिर्काउँछ। जाडोमा, संक्रान्तमा, पृथ्वी सूर्यको नजिक छ, तर यसको झुकाव उत्तरी गोलार्धमा सब भन्दा माथि छ। यस कारणले गर्दा जब किरणहरू पृथ्वीको सतहमा पनि झुकावमा पुग्छन्, दिन छोटो छ र ती पनि कमजोर छन्, त्यसैले तिनीहरू हावालाई त्यति तातो गर्दैनन् र यो चिसो छ।
वसन्त र शरद विषुव
यहाँ हामीले ईक्मिनोक्सहरू हामी भएको गोलार्द्ध अनुसार फरक गर्नुपर्दछ। एक तर्फ, उत्तरी गोलार्द्ध, जब यो आभासी विषुवत हुन्छ हामीसँग पोलमा छ उत्तर एक दिन6महिनामा रहनेछ, जबकि दक्षिण ध्रुवमा, एक रात6महिना रहनेछ। मैले यो पनि याद राख्नु पर्छ कि शरद beginsतु दक्षिणी गोलार्द्धमा शुरू हुन्छ।
तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ, विलायहरू र विषुववृत्ति मुख्यतया सूर्यको सम्बन्धमा पृथ्वीको चालका कारण हुन् र तापक्रम र वातावरणीय अवस्था सूर्यको किरणहरूको झुकावमा निर्भर गर्दछ। म आशा गर्दछु कि यस जानकारीको साथ तपाई solstices र equinoxes को बारे मा अधिक जान्न सक्दछौं।
लेखको पूर्ण मार्ग: नेटवर्क मौसम विज्ञान » मौसम विज्ञान » Ciencia » सॉलिस्टेस र विषुव